သမိုင်း မတိုင်မီက လူသားတို့ရဲ့ သမိုင်း - Thutazone
မူရင်းရေးသားသူ – Andrew Soe
“သမိုင်းမတိုင်မီက လူသား သမိုင်း (၁)”
မေ (၂၂) ရက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်
ထရားဗတ်စ်မြို့ (Traverse City)
မီချီဂန် ပြည်နယ် (Michigan)
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် အမှတ်မထင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော မီချီဂန် ရေကန် အောက်ခြေရှိ ကျောက်တုံး တတုံးအား ကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုရန် ပညာရှင် (၃) ယောက်ထိုနေ့တွင် ရောက်ရှိလာပါသည်။
ရေအောက်ကို တယောက်က ဆင်းပြီး အနီးကပ်ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင် ကြည့်ရှုသည့်အခါ ရှေးအခါက ရှိခဲ့သည့် ဆင်ကြီးမျိုး၏ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အတိုင်း ကျောက်တုံးပေါ်တွင် ထွင်းထုထားသည်ကို ထူးဆန်းစွာ တွေ့ရှိရပါသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀,၀၀၀ နှင့် ၁၂,၀၀၀ အကြားတွင် ရှိခဲ့သော ကျောက်တုံး ဖြစ်ပါသည်။
ပညာရှင်များ သေချာ ဂနစွာ လေ့လာပြီးနောက်လွန်စွာ မာကျောသော ဤကျောက်တုံးပေါ်တွင် ဆင်ကြီး၏ ပုံကို အသေအချာ ထွင်းထုထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တညီတညွတ်တည်း ကောက်ချက်ချခဲ့ပြီး အမှတ်မထင်ဖြစ်သော ခြစ်ရာ မဟုတ်ကြောင်း ကမ္ဘာကို ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါသည်။
အဓိက အချက်က ထိုကျောက်တုံးပေါ် ထွင်းထုထားသော ရှေးဆင်ကြီး၏ ပုံမှာ ထိုဆင်ရိုင်းကြီးမိမိတို့ ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်ပေါ် တည်ရှိခြင်း မရှိစဉ်က တည်းက ပုံ ဖြစ်နေပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ရှေးဆင်ရိုင်းကြီးတွေ ရှိသည်ကိုလူသား ရှာဖွေတွေ့ရှိ မှတ်တမ်းတင် သတ်မှတ်ထားတာက ရေခဲခေတ် ကျော်လွန်ပြီးမှ ဒီဆင်ကြီးမျိုးတွေ ဖြစ်တည် ရှိတာကြောင့် သိပ္ပံ နယ်ပယ်ရပ်မှာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၁.၈ သန်းက ကမ္ဘာကြီးကို ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည့်နောက်ဆုံး ရေခဲခေတ်ဟာ လွန်ခဲ့သောနှစ် ၁၁,၇၀၀ခန့်ကမှ အရည်ပျော်ပါတယ်။
ယခုတွေ့သော ကျောက်တုံးနှင့် ကျောက်ထွင်းဆင်ပုံက ဒိထက် စောနေပါတယ်။
အဲဒီအချိန် ရေခဲခေတ် မတိုင်မီကက လူသားဟာ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ကျောက်ထွင်း အနုပညာ နည်းစနစ်ကို သိရှိနိုင်စွမ်း မရှိနိုင်သလို လက်နက် ကိရိယာ တန်ဆာပလာများလည်း မပေါ်ပေါက်သေးပါ။
ပညာရှင်တွေ အဆိုအရ မိမိတို့ သိရှိထားသောလူသား သမိုင်းသည် ပြည့်စုံ မှန်ကန်မှု မရှိဟုဆိုကြပါသည်။
ယနေ့ခေတ် နည်းပညာတွေအရ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်များက ယခင်က တွက်ချက်မှုများ မှားယွင်းနေကြောင်း ထောက်ပြကြပါတယ်။
ဥပမာ။ ။ အင်္ဂလန်က Stonehenge၊ အီဂျစ် ဂီဇာက Sphinx ကျောက်ထွင်းတွေဟာ လွန်ခဲ့သော နှစ် (၁၂,၀၀၀) ကျော် ဘီစီ ၁၀,၀၀၀ကျော်က ထုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကို ယနေ့ သိရှိလာကြပါပြီ။
ပို၍ ရှာဖွေ တွေ့ရှိလေလေ မိမိတို့ လူသားနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်တည်ရှိခဲ့ခြင်းဟာ နောက်သို့ပို၍ ဆုတ်သွားပြီး သမိုင်းမတိုင်မီ ခေတ်ကတည်းက လူသား သမိုင်းတခု ရှိနေမှန်း ပိုမို သိရှိလာကြပါတော့တယ်။
ကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာ သင်ရသော သမိုင်းမတိုင်မီခေတ်ထက် အများကြီး ပိုစောပြီး ယနေ့ခေတ်လို နည်းပညာပြည့်စုံသော ခေတ်ကဲ့သို့ ခေတ်မီသော လူသား သမိုင်းရှိခဲ့ပါသည်။
ပူးမားပွန်ကူ၊ တီဟိုနားကိုး (Puma Punku, Tiahu-anaco) တို့ကို ဥပမာပေး ပြောရရင် ယခင်က ပညာရှင်တွေက ဒီကျောက်ဖြစ် အဆောက်အဦးတွေကိုအေဒီ (၅၀၀) နှင့် (၈၀၀) အကြား သတ်မှတ်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခု နည်းပညာများဖြင့် စစ်ဆေးမှုအရ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ဘီစီ ၁၂,၀၀၀ ခန့်၊ဆိုလိုသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၁၄,၀၀၀ ခန့်က တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိလာကြပါသည်။
ယနေ့ ခေတ်မီပါသည် ဆိုသည့် မိမိတို့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဒီလို တည်ဆောက်ဖို့ မပြောနဲ့ ဒီကျောက်တုံးကြီးမျိုးတွေလို ချောမွှတ်နေပြီး အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရန် အံဝင်ဂွင်ကျ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကျ ဖြစ်အောင်တောင် ဖြတ်တောက်နိုင်ခြင်း နည်းပညာ မရှိသေးပါ။
ဒီလို ခေတ်မီဆန်းပြား ရှုပ်ထွေး အဆင့်မြင့်မားလွန်းသော ယဉ်ကျေးမှုကြီးတခု မိမိတို့ ကမ္ဘာဂြိုလ်ပေါ်မှာ နှစ်ထောင်သောင်းပေါင်း များစွာကဖြစ်တည် ရှိခဲ့သည့် အထောက်အထား အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေပါသည်။
ဒီလိုဆိုရင် မေးစရာ မေးခွန်းက သူတို့ ဘယ်သူတွေလဲ ? ဘာဖြစ်ခဲ့ ကြတာလဲ ? ဘယ်ရောက်ကုန်ကြတာလဲ ?
“သမိုင်းမတိုင်မီက လူသား သမိုင်း (၂)”
ကမ္ဘာ အနှံအပြားမှာ မည်သူတွေ မည်သည့် အချိန်က တည်ဆောက်သွားမှန်းမသိတဲ့ မယုံနိုင်ဖွယ် ကြီးကျယ် ခန်းနား ဆန်းပြားလှသော ပိရမစ်၊ အဆောက်အဦး၊ ကျောက်တိုင်၊ ရုပ်ထု စသဖြင့် မြောက်များစွာ ရှိပါတယ်။
လူသားတွေက ဒါတွေကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိကြတဲ့အခါ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာက လူသားတွေ တည်ဆောက်ခဲ့သည်လို့ပဲ အကြမ်းဖျဉ်း နား
ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်များကလည်းဒီယူဆချက်ကို လက်ခံကြပါတယ်။
ဒီလိုဆိုရင် မိမိတို့ လူသား သမိုင်းမတိုင်မီ ခေတ်ကတည်းက ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အတူ တိုးတက်သောအခြား လူ့ဘောင် လူ့လောကကြီး မိမိတို့ ဂြိုလ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဖြစ်တည် ရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့ ယူဆစရာဖြစ်လာပါတယ်။
အနီးစပ်ဆုံး စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုအဖြစ် “သမ္မာကျမ်းဟောင်း” (Old Tastament) လို့ ယေဘုယျ ခေါ်ဆိုကြသော ဂျူဒေးယိုး ခရစ်ယာန်ကျမ်း (Judeo – Christian Bible) မှာ တင်ပြထားတာကို စမ်းဆစ် ကြည့်ကြတဲ့အခါ ပထမဆုံး လူသားအဖြစ် ထာဝရ ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဟု ယူဆဘွယ်ဖြစ်သော အာဒမ်နဲ့ဧဝ (Adam and Eve) တို့မှ သားဖြစ်သူ “ကိန်း” (Cain) မွေးဖွားပြီး နောက်ပိုင်းမှသာ အဆင့်ဆင့် မျိုးပွါးရာကနေ အလွန် စည်ကား သိုက်မြိုက်လှတဲ့ လူ့ဘောင် လူ့လောကကြီးပေါ်ပေါက်လာရပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
*( စကားချပ်။ ။ Cain အပြင်Abel,Seth အပါအဝင် အခြား သားသမီး အများအပြားလည်း ရှိသေးသလို အနည်းဆုံး (၇) ယောက် ရှိတယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်)။
ဘုန်းတော်ကြီး Rev. Lionel Fanthorpe
ဘုန်းတော်ကြီး Rev. Lionel Fanthorpe ပြောတာကတော့ “သမ္မာကျမ်းလာ ပုံပြင်တွေ (Biblical Stories) ထဲမှာ သံသယ ဖြစ်စရာ၊ နားလည်မှုလွဲနိုင် စရာ ကိစ္စတွေ အများအပြား ပါရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း Homo Sapien လို့ ခေါ်တဲ့ မိမိတို့လူသား မျိုးနွယ် တခုထဲသာ ဒီဂြိုလ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိခဲ့တာ မဟုတ်သလို ပထမဦးဆုံးလည်း မဟုတ်ခဲ့ပါလို့ ဆိုပါတယ်။
သို့သော်လည်းပဲ ဧဒင်ဥယဉ်ထဲက အာဒမ်နဲ့ ဧဝကိုပဲ ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး လူသား မိဘ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ညီဖြစ်သူ Abel ကို သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်ပြီးနောက် Cain တယောက် နေထိုင်ရာ ဋ္ဌာနေဟောင်းကိုစွန့်ပြီးနောက် မြို့တမြို့ကို ရောက်တဲ့အခါ အခြား သက်ရှိတွေကို တွေ့ရတယ်လို့ ကျမ်းဟောင်းမှာ ရေးထားပါရှိပါတယ်။
သူတို့တွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲ ?ဘာတွေလဲ ?
“သမိုင်းမတိုင်မီက လူသား သမိုင်း (၃)”
အာဒမ်နဲ့ ဧဝ မတိုင်မီ ရှေးခေတ်ကတည်းကိုက ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ သက်ရှိတွေ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ရှေးဟောင်းကျမ်း အတော် များများမှာ အထင်အရှား ရေးသားဖော်ပြတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီခေတ်ကာလကို Pre-Adamite လို့ အင်္ဂလိပ်လို ခေါ်ဆို သုံးနှုန်းပါတယ်။
ရဟူဒီ တရားဟောဆရာ Rabbi Ariel Bar Tzadok ရှင်းပြတာကတော့ “အာဒမ်ခေတ် မတိုင်မီ ကာလက အကြောင်းအရာတွေဟာ လွန်စွာရှေးကျပြီး ရှည်လျားလှတဲ့ ရာဇဝင်တခု ဖြစ်သလို သူတို့ဟာ ဘယ်သူတွေလဲ၊ ဘာတွေလဲ၊ ဆိုတာကို ဖော်ပြတဲ့ ရိုးရာပုံပြင်များလည်း အများအပြား ရှိတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။
ထို့အပြင် ဒီဒဏ္ဍာရီ ရိုးရာပုံပြင်တွေထဲမှာ လူသားတွေဟာ နှစ်ထောင်နဲ့ချီ အသက်ရှင် နေနိုင်ကြတယ်လို့ဆိုထားသလို နည်းပညာ အဆင့်အတန်းလည်း လွန်စွာမြင့်မားကြတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အကြောင်းတခုခုကြောင့် သူတို့ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပျက်သုဉ်းပြီးနောက် ကြယ်တာရာစု တွေဆီကို ထွက်ခွါသွားကြပါတယ်။
အာဒမ်ခေတ် မတိုင်မီ ကာလ Pre-Adamic ယဉ်ကျေးမှု ပျက်သုဉ်းသွားတဲ့အခါ အချို့က ကြယ်တာရာစုတွေကို ထွက်ခွါသွားပြီး ဘုရားသခင်၏ အမိန့်အရ မိမိတို့၏ လက်ရှိကမ္ဘာကို လေ့လာ စောင့်ကြည့်လျှက် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့ကို “စောင့်ကြည့်နေသူ” (The Watcher)များလို့ ခေါ်ကြောင်း သူတို့ အကြောင်းတွေကိုယခင် ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
အချို့ကတော့ အသွင်ဏ္ဍာန် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ မိမိတို့ ကမ္ဘာမှာပဲ ရောနှော နေထိုင်လျှက်ရှိပါတယ်။
တနည်း နားလည်အောင် ရှင်းရှင်း ဆိုရလျှင် မိမိတို့၏ အံ့စရာ ပြာလဲ့လဲ့ ကမ္ဘာမှာ အခြားဂြိုလ်က သက်ရှိတွေ လာရောက် နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး သူတို့ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ အဆောက်အဦး၊ အထိမ်းအမှတ်၊ အစုအဝေး စသည်ဖြင့် တချိန်က စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ နေထိုင်နေကြရာကနေ အကြောင်းတခုခုကြောင့် ဒီကမ္ဘာကနေ ထွက်ခွါသွားခြင်းကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို သူတို့တတွေ သိမ်းပိုက် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အထောက်အထား သမိုင်း အချက်အလက်တွေကို တကမ္ဘာလုံးအနှံ့ ဘာသာတိုင်း ၊ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းမှာ ရှာဖွေ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ရှေးဟောင်း အီဂျစ်တွေက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူ့ဘဝ အစကို “Zep Tepi” (The First Time) ဟုခေါ်ဆို သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီး “အိုဆိုင်းရစ်” (Osiris) ဘုရားသခင်က ကမ္ဘာကို အုပ်စိုးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ယနေ့အထိ ကျောက်ထွင်း ရုပ်ထုတွေ၊ အဆောက်အဦးပျက်တွေ၊ အထိမ်းအမှတ်တွေ ရှိနေပါတယ်။
ရှေးခေတ် ဂရိတွေကတော့ အဲဒီ အချိန်ကာလကို”ရွှေခေတ်” (Golden Age) လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတိုက်တန် (Titans) တို့၊ အိုလမ်ပီယန် (Olympians) နတ်ဘုရားတွေ အုပ်စိုးပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထို့အပြင် ရှေးဟောင်း ဆူမားရီးယန်း (Sumerian)ကျောက်စာတွေမှာတော့ လူသားကို မဖန်ဆင်းခင် ကမ္ဘာကြီးဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ခြေဖဝါးတော်အောက်မှာ ထားရှိကြောင်း အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် စကားလုံးတွေကို ဖယ်ရှားပြီး နားလည်ရမယ်ဆိုလျှင် အခြား ကမ္ဘာက သက်ရှိဂြိုလ်သားတွေဟာ မိမိတို့ ကမ္ဘာကြီးကို နှစ်ထောင်ပေါင်း များစွာက ကိုလိုနီပြု ထားခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။
ထောင်ပေါင်းများစွာလို့ ပြောဆိုခြင်းဟာ နှစ်တသောင်း၊ နှစ်သောင်းကို ပြောနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ သိန်းနှင့် သန်းနှင့်ချီသော နှစ်တွေကို ဆိုလိုနေခြင်း ဖြစ်ပါလေတော့သတည်း။
ကို Andrew Soe ရေးသားသော သမိုင်းမတိုင်မီက လူသား သမိုင်း အပိုင်း(၁ ၊ ၂၊ ၃) ကို စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ ဖတ်ချင်သူများ မူရင်းစာမျက်နှာ Grey Aliens မှာ မွှေနှောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။